Zon’ny vehivavy sy fanjarian-tsakafo Hiady ny hampiakarana ny tetibola ny depiote
Nandritra ny fankalazana ny 8 martsa, andro eran-tany ho an’ny vehivavy izao,
dia anisan’ny fanentanana nataon’ny Firenena Mikambana ny momba ny zon’ny vehivavy hisitraka fahasalamana, fanjariantsakafo ary fandrindram-piterahana. Tsikaritra tokoa mantsy fa ny vehivavy no matetika indrindra tratran’ny tsy fanjariantsakafo ary ireo niharan’ny herisetra tao an-tokantrano no tena miaina izany. Hita taratra izany, nandritra ny fidinana ifotony nataon’ny tambajotra Champion de la Nutrition de Madagascar, ny ONG Action Contre la Faim, ny vovonana HINA sy ireo parlemantera, tany amin’ny faritra Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony ary Atsimo Andrefana. Ny Centre Manorina ao Verezambola Antsirabe izao dia mampiantrano renim-pianakaviana 5 sahirana. Anisan’ireny Ravaoarintsoa Hanitra, manan-janaka 4 ary nilaozan’ny vadiny. Voatery nonina teny an-dalana izy ary tsy nanana izay hamelomana an-janany. Tsy niasa rahateo izy, satria hatrao an-tokantrano no tsy navelan’ny vadiny hanao izany. Tao Ambalalehibe kaominina ambanivohitr’Ivato Centre Ambositra ihany koa dia nahitana an’i Ndrasana, vehivavy niteraka iray, nisara-bady ihany koa. Manivana volamena no asany ary vola 2.000 Ar isan’andro, farafahabetsany no raisiny amin’izany. Rehefa tsy misy asa dia mangataka amin’ny mpiara-monina no ataony hamelomany an-janany. Manoloana ireny tranga ireny dia nanambara Rtoa Voahanginirina Zafimandimby Marie-Laurette, solombavambahoaka voafidy tao amin’ny distrikan’Isandra, faritra Matsiatra Ambony, filoha lefitry ny komisiona momba ny miralenta sy ny fampandrosoana eo anivon’ny Antenimieram-pirenena, fa hiady mafy ry zareo parlemantera mba hanondrotana ny tetibola hampiroboroboana ny miralenta sy ny fanjariantsakafo eto amintsika. Ady efa nilokalokan’ny filoham-pirenena hatao rahateo ny fampihenana ny tahan’ny fanjariantsakafo ho 21% ary ady imasoan-dramatoa vadiny ny momba ny fampanjakana ny miralenta. Tanjona mifameno ireo, satria rehefa misitraka ny zony ny vehivavy dia mihena ho azy ny tahan’ny tsy fanjariantsakafo.